Madaxweynaha Puntland oo booqday xarunta ciidamada Badda • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Madaxweynaha Puntland oo booqday xarunta ciidamada Badda
Madaxweynaha Puntland oo booqday xarunta ciidamada Badda
Madaxweynaha Puntland Cabdiraxmaan Maxamed Faroole ayaa maanta kormeer ku tagay xarunta ciidamada Badda ay ku leeyihiin duleedka Airporka magaalada Bosaaso.
Madaxweynaha ayey kormeerkiisa ku wehliyeen xubno kamid ah maamulkiisa iyo mas’uuliyiinta hada maamula ciidamada Badda.
Madaxweynaha ayaa goobtaasi kula hadlay ciidamo gaaraya 200 askari oo kamid ah ciidamada Badda asagoo ugu mahadnaqay hawlgalkii ay dhawaan ciidamada ka sameeyeen deegaanka Garacad oo ay kusoo furteen 22 kamid ah dadkii ay burcad badeeda ku heysteen Markabka MV Iceberg 1.
Hawlgalkaasi ayuu ku dhintay mid kamid ah saraakiisha ciidamada Bada Puntland oo lagu magacaabay Cabdirisaaq Cawil Farey (AUN).
Madaxweyne Faroole ayaa maalmahan kormeer ku tagayey xarumaha dowlada ee ku yaal magaalada Bosaaso.
Caqabadaha soo wajahay Mashruuca ciidamada Bada PMPF
Dhawaan ayaa la joojiyey mashruucii shirkadii Saracen International ay ku tababareysay ciidamada Bada ee Puntland, kadib markii lagu eedeyey shirkadaasi inay wax musuq maasuqday taasina sabab u noqotay in dowlada Imaaraadka oo mashruucan maalgelisay ay joojiso lacagtii ay ku bixin jirtay.
Sidoo kale Saracen ayuu guddiga Qaramada Midoobay u qaabilan cunaqabateynta hubka ku eedaysay inay jabisay cunaqabateynta hubka ee saaran dalka Soomaliya. Arrimahan isbiirsaday ayaa saameyn weyn ku yeeshay awoodii ciidamada bada ee Puntland iyo tirada askartooda oo qaar badan aan mushahar qaadan bilihii lasoo dhaafay.
Hawlgalkii ugu danbeeyey ee ciidamada Badda ka sameeyeen deegaanka Garacad oo ay ku soo furteen shaqaalihii markabka MV Iceberg 1 ayaa lagu tilmaamay inuu ahaa mid lagu muujinayey in ciidamadan ay weli wax ka qaban karaan la dagaalanka burcad badeeda isla markaana Beesha Caalamka looga codsanayo inay markale maalgeliso mashruucan.
Maxamed Farole oo ku dhexjira Shaqaalihii MV Iceberg 1 ee lasoo daayey
Hase yeeshee caqabadaha weli hortaagan taakuleynta caalamiga ah ee ciidamada Bada ee tababartay Saracen ayaa ah in ciidamadaasi ay ka amar qaataan oo kaliya Madaxweynaha Puntland Cabdiraxmaan Faroole isla markaana marar dhawr ah loo adeegsaday arrimo siyaasadeed iyo cadaadinta dadka ay maamulka u aragto mucaaridka.
Ciidamadan ayaa sidoo kale amarka hada si toos ah uga qaata Wiilka Madaxweynaha ee Maxamed Cabdiraxmaan Faroole oo asagu maanta kamid ahaa xubnaha Madaxweynaha kormeerkiisa ku wehliyey.
Guddiga Shaqada ee Qaramada Midoobay u xilsaartay arrimaha Calooshood u shaqeystayaasha iyo Ciidamada gaarka ah ayaa bishan Qoraal ay kasoo saartay dalka Soomaaliya ugu baaqday in Dowlada Soomaaliya ay sharci gaar ah oo lagula xisaabtamo ciidamadan u sameyso guud ahaan dalka Soomaaliya, si loola xisaabtamo ciidamadan hawlaha ay qabtaan iyo danbiyada ay geysan karaan.
Bancroft iyo Puntland
Kadib markii la joojiyey mashruucii ay maareeynaysay shirkada Saracen international ayey dowlada Imaaraadka Carabta soo jeedisay in mashruucan lagu wareejiyo shirkada Bancroft oo laga leeyahay dalka Maraykanka, isla markaana ah midda hada tababarada siisa ciidamada AMISOM ee ku sugan magaalada Muqdisho.
Shirkada Bancroft ayaa talo ahaan usoo jeedisay Dowlada Puntland in ciidamada Bada ee Puntland la hoos geeyo ciidamada Dowlada Federaalka Soomaaliya, isla markaana hawlgaladooda lagu fidiyo dhamaan dalka Soomaaliya, ayadoo cutubyo kale oo kamid ah ciidamada Bada laga sameenayo dhanka magaalada Muqdisho iyo xeebaha koonfureed.
Sarkaal ka tirsan shirkada Bancroft oo ku sugan Muqdisho
Arrintan ayaa waxaa kasoo horjeestay Madaxweynaha Puntland oo diiday in ciidamadan noqdaan kuwo Federaal ah. Balse shirkada Bancroft ayaa sheegtay inay ayadu hada diyaar u ahayn inay ka shaqeyso Puntland oo kaliya balse diyaar u tahay in ay ciidamo uwada dhisto Puntland iyo Federaalka oo ay noqdaan ciidamo Qaran.
Bancroft ayaa sidoo kale ka cudur daaratay inaysan maareyn karin ciidamada bada ee Puntland qaabka ay hada u dhisan yihiin, ayadoo saraakiil ka yimid magaalada Muqdisho oo dhawaan booqday xerada ciidamada Bada ee Bosaaso ay sheegeen in ciidamada Bada aan mushahar la siin isla markaana ay qaar badan la baxeen hubkii lasiiyey oo u badnaa hubka fudud ee qoryaha AK 47.
Weli wax xal ah looma helin mashruuca Ciidamada Badan ay la wareegto shirkada Bancroft, mana jirto maalgeliyayaal kale oo weli diyaar u ah inay mashruucan markale deeq ku bixiyaan. Arrintan ayaa lagu eedeenayaa siyaasada Madaxda Puntland oo doonaya in ciidamada u noqdaan kuwo gaar u ah Madaxtooyada Puntland iyo waliba farogelinta Madaxweynaha oo si weyn u cabsi gelisay maalgeliyayaasha mashruucan horey diyaarka u ahaa inay deeqda ku bixiyaan.
Dadaalkii Imaaraadka iyo Maareyntii Puntland
Dowlada Imaaraadka oo ay gacansigeeda si weyn u saameysay Burcad badeeda ayaa ayadu qorshaha ay ka lahayd ciidamada Badda ee Puntland ahayd mid ku timid niyad wanaag iyo in Soomaalida gacan lagu siiyo inay ayagu xal u helaan burcad badeeda khal khalka gelisay gaadiidka badda.
Dowlada Imaaraadka ayaa si weyn uga niyad jabtay habka ay Puntland u maareysay mashruuca iyo waliba xiriirka hoose ee Madaxtooyada Puntland iyo Saracen taasi oo la sheegay in ay hada maqan tahay dhaqaale gaaraya 22 milyan oo dollar oo ay bixisay imaarada Abu Dhabi.
Faarax Cali iyo Maxamed Faroole
Bishii November, Wafdi ka socda Puntland oo ay hogaaminayaan Wasiirka Maaliyada Faarax Cali iyo Wiilka Madaxweynaha Maxamed Faroole oo booqasho ku tagay dalka Imaaraadka ayaan ku guuleysan waayey inay dowlada Imaaraadka markale xiriir kala sameeyeen dib usoo celinta mashruucii Ciidamada Badda ee Puntland.
Taageerada Imaaraadka ayaa sidoo kale fursad wanaagsan u ahayd Puntland ay ku dhisato ciidamo tayo leh oo bada ah, balse arrintan burburka ku keentay mashruucan ayaa lagu eedeeyey inay tahay habkii Madaxtooyada u maareysay hawlgalada ciidamada iyo waliba dhaqaalihii lagu bixiyey mashruuca oo la sheegay inaysan intii badneyd gaarin ciidamada Bada oo aan hada mushahar qaadan muddo 5 bilood ah.
Waxaa ayaduna jawaab loo waayey mushaharaadkii ciidamada Bada oo ay Imaaraadka u qoondeeyeen oo ahayd 600 dollar askari walba oo ay Puntland ka dhigtay 150 dollar askarigii, lacagta kasoo hartay dhaqaalaha loo qoondeeyey ayaan la ogeyn meeshii ay aaday. Sidoo kale tirada ciidamada oo markii hore lagu sheegay 1500 ayaa markii danbe ay soo baxday inay askarta ka yaraayeen 500, sida ay xaqiijiyeen guddi ka socday shirkada Bancroft, walow horey loo bixinayey mushaharaadka 1500 askari.
Shirkada Saracen International oo ayadu hada sheegtay inay mashruucan joojisay ayaa iska fogeysay wax musuq maasuq ah in dhankeeda ka yimid ayadoo sheegtay in mashruucan uu yahay mid Puntland dhaqaalaheeda ay gacanta ku heysan oo ayagu helayeen oo kaliya kharashaadkii loogu talo galay hawlwadeenada shirkada iyo qalabka.
Shirkada Saracen ayaa sidoo kale u gudbisay dowlada Imaaraadka dhamaan kharashkii ay ku bixisay sameynta xerada Ciidamada iyo Gaadiidka ay siisay ciidanka, balse Saracen ayaa sheegtay in dhaqaalaha mushaharka uu ahaa mid ay Dowlada Puntland maamuleysay.
Waxaanse la ogeyn in dadaalkii lagu soo badbaadiyey shaqaalihii markabka MV Iceberg 1 ay wax ka bedali doonto caqabadihii ku yimid mashruuca ciidamada Badda Puntland, walow su’aalo badan la iska weydiinayo habkii ay ku baxsadeen burcad badeedii afduubka ku heystay markabkaasi oo ay ku jiraan hogaamiyihii kooxdaasi iyo 11 kamid ah ragii hubeysnaa ee markabkaasi muddo ku dhaw 3 sano afduubka ku heystay.